China Thermocouple yeBarbecue Vagadziri uye Vatengesi - Aokai
Musha > Zvigadzirwa > Kubika kweThermocouple > Thermocouple yeBarbecue
Thermocouple yeBarbecue Vagadziri
Pazasi pane akati wandei Thermocouple yeBarbecue kubva kune akati wandei akasiyana barbecue grills. Kunyangwe ese gasi log fireplace pilot masisitimu anoshandisa tekinoroji imwechete isu tiri kutarisa pane gasi grill valve pano. Mukona yepamusoro yekurudyi kune Thermocouple yeBarbecue
Tarira yese Thermocouple yeBarbecue ine chivharo chealuminium apo thermocouple screws kuvharuvhu.
Kuedza vharuvhu yekuchengetedza uye Thermocouple yeBarbecue tanga wabvisa vharuvhu yekuchengetedza kubva kubhayaki. PaDCS vharuvhu yekuchengetedza - ese mavhavhari eDCS - anopinda muzvakawanda. Kuti ubvise vharuvhu patsanura gasi mutsetse unosvika munzira yese kudzoka kune yekutsva rotisserie uye bvisa iyo thermocouple. Bvisa vheji rese kuti ubvise. Bvisa chivharo chealuminium panonamira iyo thermocouple.
Mukati mevhavha tichaona solenoid kana kapu yabviswa. Iyi solenoid inotsvedza kunze kwevharuvhu. Pazasi pevharuvhu yekudzivirira pane kasimbi kadiki kasingawanzo kubuda uye zvinonetsa kutsvedza uchidzokera mugomba diki painoisa mukati meiyo valve pazasi pe solenoid.
Cherekedza iyo chitubu kumagumo ekupedzisira kweThermocouple yeBarbecue. Paunodzvinyirira iyo DCS bhatani kana nemamwe maBBQ mabhenji pusha mune yekudzora vharuvhu pfundo rino rinomanikidzwa uye simbi kumagumo inosundidzirwa kumusoro kurwisa solenoid.
Tarisa kukuvara. Mifananidzo pazasi peji ino inoratidza solenoid yakakanganiswa. Chinhu chacho chakagadzirwa nepurasitiki. Makoriri emhangura nesimbi inova Thermocouple yeBarbecue iri mukati meimba yesimbi iyi. Kana mukati mevhavha yakasviba yakakuvadzwa zviri pachena kuti ndizvo zvinoda kuchinjwa. Inofanirwa kucheneswa uye kudzikiswa kuitira kufamba nekubatana kuri nyore.
Akangwara, Anogadzikana Dhizaini: Zvimiro zvinowedzera kusvika pahunhu uye kushandiswa
Splash-proof kuumbwa kwekusimba kwekunze kushandiswa, uye magnetic kutsigira kwekuwedzera sarudzo dzekuisa. Inoburitsa makwikwi nemakore.
Ma probes edu ndeechokwadi, akasimba, uye anogara kwenguva refu muindastiri. Wedzera mashandiro kuZviratidzo zvako nemamwe ma probes.
Inoenderana neBillows: Shandisa neyedu BBQ tembiricha yekudzora fan
Batanidza yedu maBillows BBQ Kudzora Fan kune ako maSiginecha kufonera mubiki temp mune yako BBQ gomba awa mushure meawa. Rongedza tembiricha uri kure.
Thermocouple yeBarbecue Inogara panzvimbo ine hwaro hwakasimba uye magineti akasimba kumashure
Backlit dashboard-maitiro ekuratidzira kuronda nguva, maaramu, Min/Max
Rechargeable bhatiri ine yakasanganisira magetsi adapter
Yakagadzirwa muUtah neThermoWorks
Yakagadzirirwa kukwikwidza Thermocouple yezvikwata zveBarbecue, zvitoro zvekuputa fodya, nyanzvi dzekubika, uye avo vanoda kubika saivo, Masaini ane yakavakirwa-mukati Wi-Fi uye Bluetooth isina waya tekinoroji inozvirumbidza 4 chiteshi chekutarisa tembiricha inoenderera iine ese ane simba maficha uye nyore iwe. 'ndauya kutarisira kubva kuThermoWorks.
Chekupedzisira, Thermocouple yeBarbecue inoshanda neako smart mudziyo Thermocouple yeBarbecue seyakamira-yega unit ine mabhatani emuviri (saka haufanirwe kusvibisa smartphone yako). Masiginecha anouya neese Wi-Fi uye Bluetooth isina waya tekinoroji paboard saka iwe unowana inoenderera chiratidzo uye chaiyo-nguva yekuzivisa ungave uri mumunda kana mhiri kweguta. Setup inokurumidza uye iri nyore pasina kumboda kuverenga bhuku rekuraira. Zviratidzo zvinomira zvakaparadzana nemakwikwi, kubva kune yakakura, yakavhenekerwa dashibhodhi inoratidzira uye yakasimba, inomira yega mamiriro ekunze-inodzivirira mamiriro ekunze kune ayo anorongwa chiteshi mazita uye itsva tembiricha yakakwira silicone mavara mabhendi kuti uzive paunongotarisa kuti ndeipi chiteshi chinoenda neicho probe. Thermocouple yeBarbecue tembiricha inoongorora yakasarudzika kuThermocouple yeBarbecue kuti iunze zvirinani, mhinduro inokurumidza, tembiricha yakakura uye hupenyu hurefu hunobatsira. Bika zvakanyanya kamwechete uye uzvidye mwoyo zvishoma nezvemibairo neSignals.
Zvikwangwani zvakagadzirirwa kuteedzera tembiricha pamusoro penguva yakawedzerwa iine mwero-yekupisa nzira dzekubikira dzakadai sekuputa, kugocha muovheni, kudzika-kukacha, kubika kumba, uye Sous Vide uye kushandiswa uchibika. Masaini haafanirwe kushandiswa pachinzvimbo chedigital instant-read thermometer, Thermocouple yeBarbecue kana kushandiswa nebroiling.
Iine Thermocouple yeBarbecue tekinoroji yakavakirwa mukati, iwe unogara unogara wakabatana kune yako smart kifaa. Easy-as-pie setup kusiyana nevamwe vakomana.
Zviratidzo zvinoshandisa Wi-Fi kuchengetedza vako vabiki gumi vachangopfuura mugore. Famba mairafu ako, kuverenga kwaMax / Min, uye nhoroondo yekuzivisa chero nguva muapp, kana kudhawunirodha kufoni yako kuitira kuchengetedza. Iro gore rinochengeta rekodhi mhenyu panguva yevabiki vako ichikubvumidza iwe kuti utarise tembiricha yako kubva kune chero foni kana piritsi panguva imwe chete.
Thermocouple yeBarbecue Inogamuchira ma probes mana. Inouya neayo matatu Pro-Series Yakakwira Temp Kubika MaProbes uye imwe Pro-Series Yakakwira Temp Mhepo Probe yekutarisa yako gomba tembiricha.
Zviratidzo zvinoshanda neese edu Pro-Series probes. ThermoWorks 'Pro-Series maProbes ndiwo akanyanya mubhizinesi kunyatso, mukurumari, uye kupisa kupisa. Tora chivimbo chinouya neThermoWorks probes uye metres.
Isa zita rakasiyana-mana rezita rechiratidzo chega chega (kureva Mombe, Nguruve, Gwayana). Uyezve, Zviratidzo zvinouya Thermocouple yeBarbecue iyo inomonera pamucheto wega wega wega wega probe, kuti iwe ugone kuona nekutarisa kuti ndeipi inowirirana inoenderana neprobe.
Zvakare Inoshanda seThermocouple yeBarbecue
Dzora mabasa ese ari maSignals kubva pafoni yako kana nemabhatani emuviri pane mudziyo. Iyo hombe, ine bold dashboard-yakafanana inoratidza inoratidza zita rezita, tembiricha iripo, yakakwirira uye yakaderera alarm marongero, uye alarm state yechiteshi chega chega, kuwedzera vhoriyamu, mamiriro ebhatiri, uye mamiriro asina waya. Dzora mabasa ese payuniti nemabhatani emuviri kana kubva pafoni yako.
Gesi Thermocouple Musoro weGesi Heater Yakagadzirirwa kupisa kwekushisa uye kuyera. Yakakwira mhando chinongedzo chinobatanidza chinovimbisa nyore uye yakagadzikana kubatana, ichi chinoshanda seti pf fireplace thermocouple kit.
Yakagadzirirwa kupisa kwekushisa uye kuyera. Yakakwira mhando chinongedzo chinobatanidza chinovimbisa nyore uye kugadzikana kubatana, ichi chinoshanda seti fire fire thermosoup kit. Unogona kuva nechokwadi chekutenga nekukurumidza respense thermocouple yemidziyo yemumba kubva kufekitori yedu uye isu tinokupa iwe yakanakisa mushure-yekutengesa sevhisi uye inouya nenguva.
Kuisa nyore: Iyi barbecue thermocouple iri nyore kuisa. Ndapota chengetedza musoro kuti upise paunenge uchishandisa kana kuti ungasashanda zvakanaka.Tinotarisira kugadza hukama hwehukama hwekubatana nekambani yako ine zvigadzirwa zvemhando yepamusoro, mutengo unonzwisisika, basa rinofunga uye kugadzira ramangwana riri nani riri mumaoko.
Aokai inyanzvi Thermocouple yeBarbecue vagadziri uye vatengesi muChina. Zvigadzirwa zvedu ndezve CE Certified. Mukuwedzera, isu tinopawo sampuli yemahara. Unogona kutenga zvigadzirwa zvemhando yepamusoro uye zvinogara nemutengo wakaderera kubva kufekitari yedu. Kana iwe uchifarira zvigadzirwa zvedu zvemhando, ndapota taura nesu nekukurumidza. Tarisira kushanda newe! Gamuchira shamwari kubva kumativi ese ehupenyu anouya kuzoshanya, kutungamira uye kutaurirana bhizinesi.